ရကျအတျောကွာ ရမေခြိုးရငျတောငျ ကိုယျခန်ဓာ လနျးဆနျးမှေးကွိုငျနစေမေယျ့ နညျးလမျး (၁၀) မြိုး – Myanmar
ခန်ဓာကိုယျသနျ့ရှငျးပွီး စိတျလနျးဆနျးနစေဖေို့ ရခြေိုးတာက အရေးပါပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ တဈခါတရံမှာ ရခြေိုးဖို့ အခြိနျမရတဲ့ အခိုကျအတနျ့တှလေညျး ရှိတတျပါတယျ။ ရကျအနညျးငယျကွာ ရမေခြိုးဖွဈတဲ့အခါ ခန်ဓါကိုယျ အနံ့ဆိုးတာတှကေို ကာကှယျပေးမယျ့ နညျးလမျးတှေ ရှိပါတယျ။
၁။ Baby oil – ရကျအနညျးငယျကွာ ရမေခြိုးဖွဈတဲ့အခါ ရမှေေးဆှတျတာက baby oil အသုံးပွုခွငျးက ပိုကောငျးပါတယျ။ Baby oilရဲ့ရနံ့က ခန်ဓါကိုယျမှာ အခြိနျကွာကွာ စှဲမွဲစလေို့ပါ။၂။ Baby wipe….. Baby wipeက အရပွေားပျေါက ဘကျတီးရီးယားပိုးတှကေို ဖယျထုတျပေးပွီး အနံ့ဆိုးတှေ မထှကျစတေော့ပါဘူး။၃။ ခြှေးနံ့ပြောကျဆေ….ရမေခြိုးဖွဈတဲ့အခါမှာ ခြှေးနံ့ပြောကျဆေးက အနံ့ဆိုးတှမေဖွဈအောငျ ကာကှယျပေးမှာပါ။ ၄။ အတှငျးခံ အဝတျအစား-ခန်ဓါကိုယျမှာ ထှကျလာတဲ့ခြှေးတှကွေောငျ့ အနံ့အသကျဆိုးတှေ ဖွဈလာပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ ရကျအနညျးငယျကွာ ရမေခြိူးဖွဈရငျ အတှငျးခံအဝတျအစားတှေ လဲလှယျပေးသငျ့ပါတယျ။
၅။ ခွအေိတျ…. ခန်ဓာကိုယျမှာ ခြှေးအထှကျဆုံးနရောတှထေဲက တဈနရောကတော့ ခွထေောကျပါပဲ။ ခွအေိတျကနေ ထှကျလာတဲ့ အနံဘအသကျကလညျး စိတျအနှောငျ့အယှကျဖွဈစပေါတယျ။ ခွအေိတျကို ပုံမှနျလဲပေးတာ၊ ခွထေောကျမှာ ကိုယျလိမျးပေါငျဒါလိမျးပေးတာက အနံ့အသကျဆိုးတှကေို မဖွဈစပေါဘူး။၆။ ကွကျသှနျနီ၊ ကွကျသှနျဖွူ၊ အစပျ …. ကွကျသှနျနီ၊ ကွကျသှနျဖွူနဲ့ အစပျလှနျကဲတဲ့အစားအစာတှကေို စားခွငျးက ခန်ဓါကိုယျမှာ အနံ့ဆိုးတှေ ဖွဈစပေါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ ဟငျးသီးဟငျးရှကျနဲ့ အသီးအနှံတှကေို ပိုပွီးစားပေးသငျ့ပါတယျ။
၇။ တငျးကပျြသော အဝတျအစားမြား … တငျးကပျြနတေဲ့ အဝတျအစားတှကေို အခြိနျအတျောကွာ ဝတျထားခွငျးက ခြှေးထှကျပွီး အနံ့ဆိုးတှေ ဖွဈလာစပေါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ ရမေခြိုးဖွဈသေးရငျ ပှပှခြောငျခြောငျ အဝတျအစားတှကေို ရှေးခယျြသငျ့ပါတယျ။၈။ Dry shampoo …. Dry shampoo က ဆံပငျကို ဗီတာမငျပွနျဖွညျ့ပေးပွီး ဆံပငျအဆီပွနျတာကို သကျသာစပေါတယျ။ ခေါငျးမလြှျောဖွဈသေးတဲ့ အခါမှာလညျး ဆံပငျမှာ လနျးဆနျးတဲ့ရနံ့တှေ ရှိနစေမှောပါ။
၉။ ခေါငျးစညျး …. ရမေခြိုးဖွဈသေးတဲ့အခါ၊ dry shampoo လညျး မရှိတဲ့အခါ ဆံပငျကို ခေါငျးစညျးအကွီးကွီးနဲ့ စညျးထားလို့ရပါတယျ။ အဲဒီအခါ ဆံပငျကထှကျတဲ့ အနံ့ဆိုးတှကေို ဖုံးအုပျပွီးသား ဖွဈစပေါတယျ။၁၀။ ရဓေါတျပွညျ့အောငျနခွေငျး ….. ခန်ဓါကိုယျကို ရဓေါတျပွညျ့အောငျ နတေဲ့အခါ အသားအရလေညျး စိုလာပွီး အနံ့ဆိုးထှကျတာကို မဖွဈစတေော့ပါဘူး။
ခန္ဓာကိုယ်သန့်ရှင်းပြီး စိတ်လန်းဆန်းနေစေဖို့ ရေချိုးတာက အရေးပါပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခါတရံမှာ ရေချိုးဖို့ အချိန်မရတဲ့ အခိုက်အတန့်တွေလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။ ရက်အနည်းငယ်ကြာ ရေမချိုးဖြစ်တဲ့အခါ ခန္ဓါကိုယ် အနံ့ဆိုးတာတွေကို ကာကွယ်ပေးမယ့် နည်းလမ်းတွေ ရှိပါတယ်။
၁။ Baby oil – ရက်အနည်းငယ်ကြာ ရေမချိုးဖြစ်တဲ့အခါ ရေမွှေးဆွတ်တာက baby oil အသုံးပြုခြင်းက ပိုကောင်းပါတယ်။ Baby oilရဲ့ရနံ့က ခန္ဓါကိုယ်မှာ အချိန်ကြာကြာ စွဲမြဲစေလို့ပါ။၂။ Baby wipe….. Baby wipeက အရေပြားပေါ်က ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေကို ဖယ်ထုတ်ပေးပြီး အနံ့ဆိုးတွေ မထွက်စေတော့ပါဘူး။၃။ ချွေးနံ့ပျောက်ဆေ….ရေမချိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာ ချွေးနံ့ပျောက်ဆေးက အနံ့ဆိုးတွေမဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးမှာပါ။ ၄။ အတွင်းခံ အဝတ်အစား-ခန္ဓါကိုယ်မှာ ထွက်လာတဲ့ချွေးတွေကြောင့် အနံ့အသက်ဆိုးတွေ ဖြစ်လာပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ရက်အနည်းငယ်ကြာ ရေမချိူးဖြစ်ရင် အတွင်းခံအဝတ်အစားတွေ လဲလှယ်ပေးသင့်ပါတယ်။
၅။ ခြေအိတ်…. ခန္ဓာကိုယ်မှာ ချွေးအထွက်ဆုံးနေရာတွေထဲက တစ်နေရာကတော့ ခြေထောက်ပါပဲ။ ခြေအိတ်ကနေ ထွက်လာတဲ့ အနံဘအသက်ကလည်း စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပါတယ်။ ခြေအိတ်ကို ပုံမှန်လဲပေးတာ၊ ခြေထောက်မှာ ကိုယ်လိမ်းပေါင်ဒါလိမ်းပေးတာက အနံ့အသက်ဆိုးတွေကို မဖြစ်စေပါဘူး။၆။ ကြက်သွန်နီ၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ အစပ် …. ကြက်သွန်နီ၊ ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ အစပ်လွန်ကဲတဲ့အစားအစာတွေကို စားခြင်းက ခန္ဓါကိုယ်မှာ အနံ့ဆိုးတွေ ဖြစ်စေပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့ အသီးအနှံတွေကို ပိုပြီးစားပေးသင့်ပါတယ်။
၇။ တင်းကျပ်သော အဝတ်အစားများ … တင်းကျပ်နေတဲ့ အဝတ်အစားတွေကို အချိန်အတော်ကြာ ဝတ်ထားခြင်းက ချွေးထွက်ပြီး အနံ့ဆိုးတွေ ဖြစ်လာစေပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ရေမချိုးဖြစ်သေးရင် ပွပွချောင်ချောင် အဝတ်အစားတွေကို ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။၈။ Dry shampoo …. Dry shampoo က ဆံပင်ကို ဗီတာမင်ပြန်ဖြည့်ပေးပြီး ဆံပင်အဆီပြန်တာကို သက်သာစေပါတယ်။ ခေါင်းမလျှော်ဖြစ်သေးတဲ့ အခါမှာလည်း ဆံပင်မှာ လန်းဆန်းတဲ့ရနံ့တွေ ရှိနေစေမှာပါ။
၉။ ခေါင်းစည်း …. ရေမချိုးဖြစ်သေးတဲ့အခါ၊ dry shampoo လည်း မရှိတဲ့အခါ ဆံပင်ကို ခေါင်းစည်းအကြီးကြီးနဲ့ စည်းထားလို့ရပါတယ်။ အဲဒီအခါ ဆံပင်ကထွက်တဲ့ အနံ့ဆိုးတွေကို ဖုံးအုပ်ပြီးသား ဖြစ်စေပါတယ်။၁၀။ ရေဓါတ်ပြည့်အောင်နေခြင်း ….. ခန္ဓါကိုယ်ကို ရေဓါတ်ပြည့်အောင် နေတဲ့အခါ အသားအရေလည်း စိုလာပြီး အနံ့ဆိုးထွက်တာကို မဖြစ်စေတော့ပါဘူး။